Somali News 08.24.21 | KWIT
Isbitaallada gobolka ayaa la mid ah sidii ay ahaan jireen dhammaadkii Janaayo.
Heerka fiicnaanta imtixaanka 7 maalmood ee Degmada Woodbury waa 6%, iyadoo 98 xaaladood hal toddobaad gudaheed. Arbacadii, Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sii deyneysa warbixin toddobaadle ah oo ku saabsan isbitaallada la dhigo labada xarumood ee caafimaad ee waaweyn ee Sioux City.
Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota ayaa sheegtay in heerka tijaabada ee 14-ka maalmood ah uu ka badan yahay 9.5%, iyadoo 82 xaaladood oo cusub ay ku jiraan waqtigaas.
Sharci-dajiyayaasha Golaha South Dakota waxay isku dayayaan inay cadaadiyaan Gov. Kristi Noem si uu u yeero kalfadhi gaar ah si uu u meelmariyo mamnuucidda loo-shaqeeyayaasha u baahan tallaallada COVID-19 xitaa marka kiisaska fayrasku kor u kacaan. Dhowr Jamhuuri ah oo ka tirsan Golaha Wakiillada ayaa qaybiyay hindise sharciyeedyo ka horjoogsanaya loo -shaqeeyayaasha inay ku amraan tallaalka fayraska.